China 8mm 10mm 12mm yakadzikama chengetedzo girazi repaneru fekitori uye vagadziri | LYDGLASS
Yakapfava Girazi uye Yakadzikamiswa girazi rakamisikidzwa isarudzo isingarambike inoshandiswa seye dziva fenzi. Inoita chinzvimbo chakakosha mukugadzira yakanakisa kutarisa kune yako dziva nzvimbo. Ndicho chikonzero nei kudiwa kwegirazi inochengeterwa yekukomba dziva kuri kukwira. Hira yepamusoro yakadzikama girazi uye yakanyoroveswa girazi rakaomeswa kuti ive nechokwadi chekuchengetedzwa kwedziva fenzi.
Girazi fenzi ndeye mhando dzakasiyana. Izvi zvinosanganisira zvakaumbwa, semi-zvakagadzirwa uye zvisina furemu.
Yakagadzirirwa girazi fenzi ine mapuranga esimbi akakomberedza girazi zvinhu.
Semi yakagadzirirwa girazi fenzi haina masimbi esimbi akakomberedza girazi zvinhu. Asi mbiru dzesimbi dzinoshandiswa pakuisirwa kwayo.
Kune rimwe divi, yakazara isina girazi fenzi fenzi haina chero zvimwe zvigadzirwa zvakakomberedza girazi. Mabhoti esimbi anowanzo shandiswa pakuisirwa kwayo.
Yakapfava chengetedzo girazi pani
Kushanda Padziva repadziva, Dhekeni fenzi
Edge Flat kumucheto yakabwinyiswa, kutenderera chengetedzo kona
Kurongedza Cork mat mat pakati pegirazi
Kutakura Pasuru Kudzivirirwa Plywood Makreyiti Kurongedza kana Simbi furemu
Pashure: Acid chinopinda Glass
Zvadaro: Yakaomeswa girazi hinge pani uye gedhi pani
10mm yakadzikama chengetedzo girazi pani
12mm yakadzikama chengetedzo girazi pani
15mm yakadzikama chengetedzo girazi pani
8mm yakadzikama chengetedzo girazi pani
Yakasarudzika Laminated Yakapusa Girazi Pool Fence
yakadzikama chengetedzo girazi repaneru